ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်ကွင်းတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်ကွင်းတစ်ခု
Posted by nyimalay on Feb 20, 2011 in Myanma News | 23 comments
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှမ်းရိုးမ တောင်တန်းကြီးတွေမှာ ရှိတဲ့ တောနက်တစ်နေရာမှာ ရှိတဲ့ ကန်ကြီးတစ်ကန်အနီးက ကျောက်ဆောင်တွေကို ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ နေရာအတိအကျကိုတော့ စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပုံဟာ ရှုထောင့်တစ်ခုကနေပြီး
ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်ကို နေရောင်ခြည် ကျရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ
ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဘယ်မှ ညာ ၊ ညာမှ ဘယ်သို့
စောင်းပြီးကြည့်ကြည့်ပါ ။ ဘာထူးခြားသလဲလို့ ။
ဘာထူးခြားမှုကို သင်တွေ့ပါသလဲ ။
အခုပုံကို အတည့်အတိုင်း ထောင်ကြည့်လိုက်ပါ ။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပဲ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ ပုံလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ် ။သဘာဝတရားကြီးက အံသြဖွယ်ရာကောင်းပါတယ် ။ ဒါဟာ ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာ သာနိုင်ငံမှာ သဘာဝကျောက်ဆောင်တွေမှာတောင် ဘုရား တရားရဲ့
အငွေ့အသက်တွေ ကိန်းအောင်း လို့နေပါတယ် ။
သဘာဝတရားကို လေးစား ချစ်ခင်မြတ်နိုးပါ ။ တန်ဖိုးထားပါ ။
Forward Mail မှပြန်လည်ဝေမျှသည်၊။
so amazing! တကယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် ဒီလို ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်က တော်တော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။
ကွေးကွေးကို ချီးကျူးပါတယ်။ ဒီလောက်ကွန်မကောင်းတာ ပုံတွေပါတင်နိုင်တယ်နော်
တစ်ခုတစ်ခုတင်ဖို့ကို အကြာကြီးစောင့်ရတယ်မမ…………. ပိစိကွေး 4နာရီကတည်းကစသုံးနေတာ………… 4နာရီနီးပါးရှိနေပြီ………. 1600 ဖိုးတော့ကုန်ပြီမမ
ပေးဆေးကွိက 4နာရီကတည်းက စသုံးနေတာ တင်လို့ ရသေးတယ်… ဟွန့် .. ။
အီးတုံးက 14ရက်နေ့ကတည်းက ပို့စ်တောင် အခုထိ တင်လို့ မရသေးဘူး ပုံလေး လေးပုံလောက်ပဲ ပါတာကို ဖိုင် ဆိုဒ်မလျှော့ချင်လို့ ပါ … ။ အဖြစ်မှန်လေး လူတွေ သိစေချင်လို့ တစ်ပုံတက်အောင် စောင့်နေတာ အခုထိပဲ .. ။ စိတ်ပိန်တယ် .. ။
ဒါနဲ့ အခု တင်ထားတဲ့ ပုံ က ဖိုတို ရှော့နဲ့ လုပ်ထားတာပါ .. ။ တစ်ခါ မေးလ်ထဲမှာ ရဖူးတယ် .. ဘယ် group ကပို့မှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ ဘူး ။ အတု ယောင်တွေ ဘာတွေနဲ့ ငြင်းခုန်ကြသေးတယ် ။
ဦးဦးမှော်ဆရာ ထင်တာပဲ ……
အင်ကြီးပါ … ကြည့်ယုံနဲ့ သိသာပါတယ် …။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားပြီးတင်ပေးထားတဲ့ ပိစိကိုတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဟေ့ ။
တော်သေးတာပေါ့.. မှတ်လောက်အောင် … ဆေးတံခဲထားတဲ့ ပုံဖြစ်အောင် ဖိုတိုရှော့နဲ့ ပြင်ပြီး ..ခါဂါဘိုရာဇီတောင် .. အနောက်မြောက်တောင်ဆွယ်..။ မြေပုံကွက်အမှတ် ၃၉၂ နဲ့ ၄၃၂ကြားနေရာလုပ်မလို့ဟာ..
ယောမင်းသားရေ ကော်ပီယူပြီး ဘယ်မှာ သွားနောက်ဦးမလို့လဲ ။
ညီမလေး ဒီပုံကိုဘယ်က ရတာလဲ။ ရေးထားတဲ့ Information က မှားနေတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုမြို့ က မလိခ မြစ်ဖျားနားမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ။
မမ Hello ရေ ဒီပုံကိုညီမလေး Forward Mail ကနရတာပါမမ………..
helloေ၇ မင်းပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ အမှန်ဆို၇င် စောစောစီးစီး သိရမှာပေါ့။
ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပုံပိုင်ရှင်က တို့ဖြစ်နေလို့လေ။ ဒီထက်ထူးခြားတဲ့ပုံတွေအများကြီး အဲ့ဒီဒေသကိုသွားရင်းရခဲ့တာ။ ဒီပုံကို ဘယ်သူ ဘယ်လိုရပြီးတင်လိုက်တယ်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ တစ်သက်မှာ တစ်ခါလောက်သာရနိုင်တဲ့ ပုံတွေမို့လို့ ပြန်ရိုက်ရင်တောင် ဒီလိုပုံတွေ ထွက်ချင်မှထွက်လိုက်မယ်။ အော် ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီဒေသကိုရောက်ဖူးတာလဲဆိုတော့ တို့ အလုပ် က ဧည့်လမ်းညွှန် ဖြစ်နေလို့ပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့အချက်အလက်တွေ ကို Wrong Information ပေးရင်တော်တော်စိတ်ဆိုးတယ်……….
ရန်ကုန် ကန်တော်လေးက .. ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ ကိုတီး .. ဖိုတိုရှေ့ာထားတဲ့ ပုံကို ..ပိုင်ရှင်ကိုယ်ထင်ပြနေတယ်..။
သူလုပ်ထားတာ .. ၄နှစ်တောင်ကျော်နေပြီတဲ့…။ အထောက်အထား ပို့ ထားတယ်..။
သူ Photoshop လုပ်ထားလဲ နဂိုရှိပြီးသားပုံကို သူကာလာချိန်းထားတာဘဲရှိတယ်။ သူဘာသာသူ ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူး။ အထောက်အထား… ဘယ်လို အထောက်အထားမျိုးလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Copy Right မရှိတာနဲ့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့တော့ မရဘူးလေ။ ဓါတ်ပုံ ဆရာတော်တော် များများ နားလည်ကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို ပိုင်ရှင်မသိဘဲ ယူသုံးရင် သူ့ကို ကောင်းကောင်းတရားစွဲလို့ရတယ်နော်….
Can we see an original photo ??
Can you uploadapost in MG ??
If this photo is real,
We should preserve this area &
It might beagood tourist attraction site.
မမ ဟဲလို (ရှမ်းဂဲ)
ရောက်ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ မျှပါအုန်း ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဝေမျှ ခံစားချင်လို့ပါ။
အမ လည်း ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မျှဝေချင်ပါတယ်။ Zorpia account ရှိရင် အမ account က http://www.zorpia.com/shangirl ဆိုတဲ့ထဲမှာ ၀င်ကြည့်လိုရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေ တော်တော်များများတင်ထားတယ်။
http://www.hi5.com/nan.myat မှာလဲ ၀င်ကြည့်လို့ရတယ်။
ဒီပုံတွေကို အရင်ကတည်းက မြင်ဘူးတယ်.
တစ်နှစ်နီးပါးတော့ ရှိပြီ ရထားတာ
“ဒီထက်ထူးခြားတဲ့ပုံတွေအများကြီး အဲ့ဒီဒေသကိုသွားရင်းရခဲ့တာ” ……..အဲဒီဒေသကို သွားရင်း ရခဲ့တာဆို တော့ သွားရင်း ရိုက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးပဲ…။ ရှင်းသွားပြီ။ ဒါဆို ရိုက်ထားတဲ့ Photographer လဲ သက်သက်ရှိပြီး ဖြည့်စွက်
Photoshop ပေးတဲ့ သူလဲ သက်သက်ရှိမှာပေါ့။ ဟေ့ ဒီမှာ ဂိုက်မမ မ Hola !! ဒီ အကြံအဖန် ဓါတ်ပုံရဲ့ပိုင်ရှင်က ကျုပ်ဗျ။ ခင်ဗျားကို လိမ်ညာမှု၊ လှည့်စားမှု၊ ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ကိုယ်ပိုင်ပြုမှု တွေနဲ့တရားစွဲမယ်။
ခင်ဗျား ရှေ့ နေ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပါ…။ ဘူးထွားဝါးဟားဟား။ ငါသာလျင် ပိုင်ရှင် အစစ် နိဂိမိ ၇၇ ဖြစ်လေ သတတ် ..။
အောင်ပုတို့ ရွာ ချောင်းဘေးက ကျောက်ဆောင်ကို
တရုပ်ကင်မရာနဲ အောင်ပုကိုယ်တိုင် ရိုက်ထားတာ
စာတတ်တိုင်း လူဂျီးနဲ့ ပေါင်းပြီး မတရားမလုပ်နဲ့ 
ပိုင်ရှင်တွေကလည်း ပေါလှချေလားးးးးးးးး…..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဓါတ်ပုံကတော့တော်တော်မိုက်၏။